warkii.com » Mareykanka oo kulan gaar ah la yeeshay saddex Madaxweyne goboleed + Sawirro
Muqdisho (warkii.com) – Xubno ka socday dowladda Mareykanka ayaa kulamo gaar-gaar ah saacadihii la soo dhaafay gudaha magaalada warkii.com ah ee Muqdisho kula qaatay hoggaamoyeyaasha Puntland, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Intooda badan waxaa kulamada uu Mareykanka la qaatay Siciid Deni, Axmed Madoobe iyo Cabdicasiis Lafta Gareen diirada lagu saaray ammaanka iyo dagaalka A-Shabaab.
Sidoo kale waxaa kulamada lagu soo qaaday iskaashi xoog leh oo dhex mara taliska ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika iyo saddexdan dowlad goboleed, si meel looga soo wada-jeesto dagaalka adag ee lagula jiro dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab.
Qoraal ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa sidoo kae lagu sheegay in muhiimadda kulamadaasi ay ahaayeen adkeynta xiriirkaa dhinacyadaasi, si loo laba jibaaro howl-gallada ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka socda koonfurta iyo bartamaha dalka.
Mareykanka ayaa ka mid ah dalalka sida weyn u taageero dowladda federaalka, wuxuuna howlgallo dhanka ah cirka ah ka fuliyaa gudaha Soomaaliya.